hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika ABA na antokom-bahoaka malagasy, Dany Rakotoson, no nandanian’izy ireo ny filohan’ny antenimieram-pirenena. Be dia be ny lalàna tsy niasa teto. Mety misy antony ny tsy nampiasana sy nanovana azy ireny ka noho izany dia azon’ny depioten’ny Tiako I Madagasikara natao ny nijanona sy niady hevitra, hoy izy, satria tompon’andraikitra amin’ny hoavin’i Madagasikara isika mianakavy. Tompon’antoka 100% amin’ny zava-misy eo amin’ny firenena koa ny mpitondra ary izay no antony hahaizana mifidy rehefa tonga ny fifidianana mba tsy hahazo depiote mivilana. Manana maro an’isa ao amin’ny parlemantera ny fitondram-panjakana ka averiko indray fa tomponandraikitra hampandroso antsika izy. Rehefa tsy tsapany izay dia ho hitany eo ny hahazo azy afaka 5 taona, hoy hatrany ity mpanao politika ity.